Part1: Maxaa dhacaya haddii aadan meel cad iPhone?
Part2: Sida loo Cad Space on Your iPhone
Part3: Waa maxay waxyaabaha mashquulin boos ugu badan ee aad iPhone
Maxaa dhacaya haddii aadan meel cad iPhone?
Marka laga xaqiiqada ah in meel bannaan oo lagu kaydiyo aad iPhone waa in si joogto ah la nadiifiyo, dad badan ma oga sababta ay tahay in loo qabto iyo waxa uu noqon doono cawaaqibka haddii meel la nadiifinin. Hoos waxaa ku qoran dhawr qodob oo ay u sharxaan cawaaqib sida:
Performance dhimay - macruufka lagu rakibay aad u baahan tahay qaar ka mid ah iPhone meel ay neefta. Laga tago lacagta ku filan oo lagu kaydiyo lacag la'aan ah qalab aad hubisaa in hawlaha macaan oo hufan ee nidaamka qalliinka. Haddii aanay jirin meel ku filan oo ku saabsan iPhone, waxaa laga yaabaa inuu bilaabo fulinaya wahsan.
Hab-Boot gaabis ah - Tan iyo dhammaan faylasha waxaa la marsiiyey by nidaamka qalliinka inta lagu jiro kabaha mobile, aan meel ku filan, iskaanka noqon karaa mid gaabis ah, sidaas daahiyaan geeddi-socodka kabaha. Sidoo kale, iPhone laga yaabaa inay qaadato wakhti dheeraad ah si ay u akhriyaan files junk oo sidoo kale keentaa dib u dhac halka booting telefoonka ah.
No Apps New - Tan iyo markii ay barnaamijyadooda u baahan tahay meel bannaan oo ku saabsan qalab aad in lagu rakibay, kaydinta yar oo lacag la'aan ah waxaa loola jeedaa awood u lahayn inuu soo dajiyo barnaamijyadooda cusub.
No Images New ama Videos - Waxaad isma badbaadin karo files warbaahinta cusub ama images haddii aanay jirin meel ku filan oo la heli karo aad iPhone.
Inkastoo ay jiraan dhowr disk nadiifinta barnaamijyadooda diyaar u ah iPhone iyo qalabka kale ee Apple, xalka ugu fudud oo ugu wanaagsan ee la heli karo waa in la isticmaalo SafeEraser Wondershare. Waxaa la iman interface sahlan in la isticmaalo, iyo ugu of fursadaha iPhone nadiifinta laga heli karaa ka furmo suuqa ugu weyn. Waxaad kala soo bixi kartaa Wondershare SafeEraser sida madal of your computer (Windows ama Mac) ka xiriirka hoose siiyey per.
Waxaa jira tallaabooyin ah oo ku lug leh marka ay timaado nadaafada aad iPhone isticmaalaya Wondershare SafeEraser kuwaas oo ku tilmaamay sida hoos ku yar:
1.Log on your computer in la account maamule kasta.
2.Use links kor ku siiyo si ay u soo bixi version saxda ah ee Wondershare SafeEraser sida ay madal of your computer. (A computer Windows halkan loo isticmaalo bandhig.)
3.Install barnaamijka on your computer iyadoo la isticmaalayo habka loo xirxiro si joogto ah.
Ku xiridda 4.After, abuurtaan SafeEraser Wondershare by double-gujinaya ay icon.
5.Use cable ee USB xogta in ay ku xidhmaan aad iPhone in kombuutarka.
6.Wait ilaa Wondershare downloads SafeEraser oo ku rakibtay darawallada loo baahan yahay si aad u iPhone kombiyuutarka.
7.Once sameeyo, ka furmo suuqa ugu weyn ee barnaamijka, riix masixi tirtiray Files button (wakiil calaamad qashinka kartaa).
8.Wait ilaa baaritaano SafeEraser ee files tirtiray la sheegay in si joogto ah loo saari karo ka iPhone.
9.After habka iskaanka u dhameystiray, ka Murayaad bidix ee interface ah, guji in ay doortaan qaybta ay ku jiraan xogta tirtirayaa.
10.From geeska midig hoose leeg- saxda ah, guji masixi Hadda in meesha laga saaro dhammaan faylasha tirtiray ka iPhone.
Fiiro Gaar ah: Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in aad bixiso ogolaashahaaga in dhamaan sanduuqyada xaqiijinta in muuqan si ay u sii wado nidaamka dalka looga saarayo ah.
11.Repeat talaabo 10 in si joogto ah loo saaro faylasha tirtiray ka qaybaha kale.
12.Once sameeyo, dib u furmo suuqa ugu weyn, riix Space Saver button (icon la astaanta sanam la leexiyay).
13.From qaybta bidix ee suuqa kala soo baxa soo socda, guji cadaadi ku cadaadisaa oo sanamyadeedii badbaadiyey on your iPhone.
Fiiro gaar ah: Compressing oo dhan images ee iPhone kor u siidaysay lacagta boos muhiim ah in aad isticmaali karaa ujeeddooyin kale.
14.Back on furmo suuqa ugu weyn, riix Nadiifinta 1-Click button (wakiil Gaetano icon a).
15.Wait ilaa SafeEraser uu baaritaanku ee junk iyo faylasha loo baahnayn iyo barnaamijyadooda la isticmaalin aad iPhone.
16.After Wondershare SafeEraser dhameystiray iskaanka, jeeg ama uncheck checkboxes matalaya files in aad rabto in aad soo saarto ka iPhone. Waxaa sidoo kale soo jeediyay in aad oo dhan barnaamijyadooda la isticmaalin ka phone nadiif ah iyo weliba si ay u isticmaalaan meel kaydinta fiican loogama.
17.Once tan la sameeyo, ka geeska midig ugu hooseysa interface ah, guji nadiifinta .
18.Wait ilaa SafeEraser ilaa nadiifiyaa xogta la doortay ka iPhone.
19.Once suuqa kala saarista data xaqiijin la soo bandhigay, waxaad la xiro karo ee suuqa kala iyo ka bixitaanka SafeEraser.
20.Restart ka nadiifiyo iPhone iyo bilaaban waxaa sida caadiga ah la isticmaalayo.
Masixi tirtiray faylasha iyo Clear iPhone Space Video Tutorial
Waa maxay waxyaabaha mashquulin boos ugu badan ee aad iPhone
Ma jiro ratio ama dhimaya for this. Si kastaba ha ahaatee, waxaa caadi ahaan loo arkaa in taariikhda khasnado iyo dhirta in la ururiyo ee iPhone ka badan markii ugu gubtay, qadar badan oo ah meel bannaan. Sidoo kale, haddii aad ciyaaraha u ciyaaraan si aad iPhone oo si joogto ah badbaadinayo horumarka, qadar hufan oo meel bannaan oo waxa uu ku mashquulsan la xogta badbaadiyey sidoo. Waxa intaa dheer in, sababta oo ah tayo leh camera ah, size oo ka mid ah sawirada la qabtay waa weyn.
Si wax looga qabto arrimaha, aad si joogto ah u sii heli karaa nadiifinta files junk ah, uninstall ka dibna dib kulan si loo saaro horumarka kulan aan loo baahnayn ama 'haraaga burburka' kale oo ka iPhone, iyo dabcan, haddii aad isticmaalayso SafeEraser Wondershare, waxaad had iyo jeer cadaadin karo images in aad iPhone si loo badbaadiyo meel disk dheeraad ah.
> Resource > Clean-up > Sida loo Cad Space on Your iPhone